War | Xaysimo | War deg deg ah
Caddaymo laga helay xeryaha dadka lagu hayo ee la sheegay ee Shiinuhu uu Muslimiinta ku jirdilo
Xog aad u badan oo laga jabsaday kombuyuutarada dowladda Shiinaha oo loo soo gudbiyay BBC-da ayaa daaha ka qaadday wax badan oo ku saabsan nidaamka qarsoodiga ah ee Shiinaha uu ku xirayo dadka muslimiinta ah ee ku nool gobolka Xinjiang ee galbeedka fog ee dalkaas.
Xogtaan ayaa caddaynaysa in la toogto qofkii iskudaya in uu ka baxsado xeryaha sida khasabka ah dadka loogu hayo, iyo xukun xabsi oo dheer oo lagu xukumayo qofkii lagu arko calaamad Muslinimo.
Qaar badan oo ka mid ah faylasha ayaa loo xqiijiyey si madax bannaan.
Dowladda Jarmalka ayaa ku baaqday in baaritaan hufan lagu sameeyo nidaamka Shiinaha ee lagu hayo dadka Muslimiinta ah ee Uyghurs-ka ee gobolka Xinjiang, ka dib markii ay soo baxeen cadeymo cusub oo ku saabsan xadgudubyo halis ah oo ka dhan ah xuquuqda aadanaha.
Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdoğan ayaa sheegay in dhawaan uu billaabi doono howlgal cusub oo militari oo laga sameyn doono xadka dhanka koonfureed, si loola dagaallamo khatarta argagixisada ee halkaasi ka jirta.
Bartilmaameedka ugu weyn ee howlgalkan ayaa noqon doona in dib loo bilaabo dadaallada lagu abuurayo aag nabdoon oo 30-km ama (20-mile) ah oo ku teedsan xudduudda Turkiga uu la wadaago Suuriya, ayuu Erdoğan ku sheegay khudbad telefishanka dalkaasi laga sii daayay.
Ma uusan bixin faah faahin intaas ka dheeri ah, balse wuxuu sheegay in howlgallada la billaabi doono marka ay dhameeyaan diyaar garowga ciidamada,kuwa sirdoonka iyo nabadsugidda.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdullahi Farmaajo oo maanta si rasmi ah xilka ugu wareejiyey Madaxweynaha mar labaad lasoo doortay ee Xasan Sheekh ayaa ka warbixiyey feylasha iyo dukumintiyada uu warjeeiyey, kadib shan sano oo uu soo xukumayey dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.
Farmaajo oo ugu horreyn soo hadal qaaday ciidankii loo qaaday Eritrea ayaa sheegay inuu Madaxweynaha cusub ku wareejiyey illaa 5,000 oo askari oo loo tababarayo qaybaha kala duwan ee ciidamada Soomaaliyeed.
Madaxweynihii hore ayaa tilmaamay in ciidamadaasi uu usoo dhammaaday tababarkooda, balse ay dib u dhigeen in la keeno , maadaama ay kusoo aadeen xilligii doorashada.
Sidoo kale wuxuu tilmaamay inuu wareejiyey badqabka kheyraadka dalka oo aan ku dhicin wax isbedal ah, isaga oo sidoo kale soo hadal qaaday kiiskii badda ee soo dhammaaday.
Waxaa kale oo uu xusay in hantida dadka Soomaaliyeed ay sideedii tahay, isla-markaana uusan jirin wax dhul ah oo uu milkii ahaan u bixiyey.
Dhinaca kale wuxuu sheegay inuu jiro codsi ay u direen QM oo ku aadan xubinada Soomaaliya, isla-markaana Soomaaliya ay golaha fariisan doonto 2025 illaa 2026.
Arrimaha kale uu soo hadal qaaday Madaxweyne Maxamed Cabdullahi Farmaajo waxaa ka mid ah inuu wareejiyey barnaamijka deyn cafiinta oo uu tilmaamay inay soo ka soo gudbeen illaa 4 marxaladood, isla-markaana ay dhimantay hal marxalad oo kaliya.
Ugu dambeyn wuxuu tilmaamay in arrinta Somaliland ay weli halkeeda tahay, balse loo baahan yahay in lasii amba qaado, si looga midnimada dalka.
Xanuunka furuqa daanyeerka oo noqday waalaca ugu weyn ee haatan dunida ka taagan
Madaxweynaha Maraykanka, Joe Biden, ayaa walaac xooggan ka muujiyay xanuunka furuqa daanyeerka ee si aan horay loo arag uga dillaacay tobanaan waddan.
Biden wuxuu sheegay in arrinta sida weyn looga walaacsan qaabka uu u fidayo cudurka isla markaana ku tilmaamay ‘Walaaca ugu weyn’ ee haatan dunida ka taagan.
“Cudurka si aad ah ayaa looga walaacsan yahay gaar ahaan qaabka uu fidayo iyo cawaab xumida ka dhalan karta” ayuu yiri Biden.
Ka hor inta aanu u duulin dalka Japan, ayaa Biden waxa uu sheegay in dalkiisa uu ku dadaalayo sidii dawo loogu heli lahaa cudurka.
“Waxaan hadda ka shaqeyneynaa sidii aan dawo ugu heli lahayn si aan u horumarinno tallaalka looga hortaggayo cudurkan, waa haddii loo helo daawo ama tallaal.”
Hay’adda caafimaadka adduunka ayaa sheegay in weli baarayso sababta furuqa daanyeerka oo sida caadiga ah ku dhaca xayawaanka uu hadda aadanaha ugu faafayo.
Cudurkan ayaa looga hadli doonaa kulan caafimaadka adduunka ay dalalka leeyihiin, kaasoo lagu go’aamiyo siyaasadaha lagula tacaalayo xannuunada ka dillaaca caalamka.
Astaamaha ugu horreeya ee lagu arko bukaanka uu ku dhaco feyraska Monkeybox ama furuqa daanyeerka waxaa ka mid ah qandho, madax-xanuun, murqo xanuun, dhabar xanuun, qarqar iyo daal.
Hay’adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in 50 kiis oo kale oo looga shakisan yahay furuqa daanyeerka la baarayo – iyadoo aan magacaabin dalalka lagu arkay cudurka.
Kiisaskan cudurkan ayaa laga diiwaangeliyay ilaa 14 dal, WHO waxay ka digtay in kiisas kale oo ku saabsan cudurka.
Maxaa keena feyraskan?
Feyraskan wuxuu la mid yahay feyraska ka dhasha busbuska inkastoo uu xooggaa daran yahay, khubaradana waxay sheegeen in halistiisu ay tahay mid sahlan.
Waxaa cudurkan inta badan lagu arkay meelo fog-fog oo ka mid ah bartamaha iyo galbeedka Afrika, oo u dhow kaymaha ku yaalla halkaas.
Waxaa jira labo nooc oo fayraskan ah oo laga soo sheegay – Galbeedka Afrika iyo Afrikada Dhexe.
Labo ka mid ah bukaannada cudurka qaba ee lagu arkay UK ayaa ka soo safray Nigeria, sidaa darteed waxay u badan tahay inay la ildaran yihiin nooca fayraska nooca Galbeedka Afrika, kaasoo ah mid fudud, inkasta oo weli la xaqiijin.
Kiiskii saddexaad wuxuu ahaa shaqaale caafimaad oo la sheegay in fayraska uu ka qaaday mid ka mid ah bukaannada.
Ma jirto wax dawo ah oo lagu talagalay feyraska Monkeybox laakin waa laga hortagi kari karaa in uu fido.
Tallaalka ka hortagga busbuska ayaa la xaqiijiyay inuu 85% waxtar u leeyahay ka hortagga feyraska furuqa daanyeerka, mararka qaarkoodna waa la adeegsan karaa tallaalkaas.
Ruushka ayaa sheegay inuu duqeyn ku burburiyay saanad hub ah oo ay dalalka Galbeedka ugu deeqeen Ukraine, xilli uu duullaanka waddankaas galay todobaadkii 12-aad.
Dhanka kale, Madaxweynaha Ukraine, Volodymyr Zelensky, ayaa sheegay in dibloomaasiyadda ay tahay xalka keliya ee lagu soo afjari karo colaadda.
Ciidamadda Ruushka ayaa si buuxda ulawareeegay gacan kuhaynta magaaladda istraatiijiga ah ee Mariupol, waxaana sidoo kale isdhiibay ciidamadii Ukraine ee halkaa kadagaalamayay.
Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa booqday Villa Soomaaliya, halkaas oo uu kula kulmay madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo aanan weli ka tagin xafiiska.
Madaxweynaha Turkiga Racep Tayyib Erdogan ayaa maanta hadla ka jeediyey masjidka Hazrat Ali ee ku yaalla magaalada Istanbul salaaddii Jimcaha ka dib.
Marka lafiiriyo xubinimada NATO ee Finland iyo Sweden , ayuu Erdogan yiri “Waxaan kulan ballaaran la yeeshay ra’iisul wasaaraha Netherland maanta. Berri waxaan wadahadal yeelaneynaa Ingiriiska iyo Finland. waxaa kale oo aan la kulmi doonaa Xoghayaha Guud ee NATO Stoltenbeg .’’
Wuxuu xusay in dalalka Yurub , oo u heysta PKK in ay yihiin argagisixiso ma arkayaan YPG in sida ay ka dhigeen ururadaas “hadalo ay ka jeediyeen baarlamaanadooda’’ayuu yiri Erdogan ” Haddii aan ognahay in NATO ay aad u neceb tahay argagixisada, haddii aan ognahay in NATO ay tahay urur dhinaca ammaanka ah, ma oggolaaneyno in urur argagixio lagu soo daro NATO, Haa ma yeeli karno, waxay ila tahay waxaa la mid ah Sweden iyo Finland ” ayuu yiri